MAMPIFANARAKA NY ROUTER TL-WR842ND TP-LINK - NY ROUTER - 2019
Mampifanaraka ny router TL-WR842ND TP-Link
Ny orinasa TP-Link dia mamokatra modely amin'ny fitaovan'ny tambajotra amin'ny ankapobeny. Ny router TL-WR842ND dia fitaovana ambany, fa ny fahaiza-manaony dia tsy ambany noho ny fitaovana lafo kokoa: ny serivisy 802.11n, efatra ho an'ny seranana, ny fanohanana ny fifandraisana VPN, ary ny port USB ho an'ny orinasa FTP. Mazava ho azy, ny router dia tokony hifanaraka amin'ny fomba fiasa tanteraka amin'ireo endri-javatra rehetra ireo.
Manomana ny router ho an'ny asa
Alohan'ny fametrahana ny router dia tokony alamina tsara. Ny dingana dia misy dingana maromaro.
Atombohy amin'ny fametrahana ny fitaovana. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny fametrahana ny fitaovana eo amin'ny afovoan'ny faritra misy ny fampiasana azy mba hahazoana maotina indrindra. Tokony hotadidina ihany koa fa misy sakana metaly ao amin'ny lalan-tseranana, ka noho izany dia mety tsy mety ny fandraisana ny tambajotra. Raha mampiasa matetika periphera Bluetooth ianao (playpads, keyboards, totozy, sns), dia tokony hapetraka eo akaikin'izy ireo ny router, satria ny fifandefasana Wi-Fi sy Bluetooth dia mety hifampitafaka.
Aorian'ny fametrahana ny fitaovana dia mila mifandray amin'ny herinaratra sy ny cable network ianao, ary mampifandray izany amin'ny ordinatera. Ny connexteur lehibe rehetra dia miorina any ambadiky ny router ary marika amin'ny loko samihafa ho an'ny mpampiasa.
Avy eo, mandehana any amin'ny solosaina ary sokafy ny endriky ny fifandraisana eo amin'ny serasera. Ny ankamaroan'ireo mpanome aterineto dia manana fizarana adiresy IP sy karazana adiresy DNS ho an'ny serivisy - mametraka ny sehatra mety raha toa ka tsy mavitrika izy ireo.
Vakio bebe kokoa: Mampifandray sy mametraka tambajotra ao an-toerana amin'ny Windows 7
Amin'io dingana fanomanana io dia tapitra hatreto ary afaka manohy amin'ny famolavolana ny TL-WR842ND ianao.
Safidy manova ny router
Ny safidy rehetra amin'ny fitaovan'ny tambajotra dia azo alaina amin'ny alalan'ny Internet. Mba hampidirana azy, ianao dia mila navigateur sy data ho an'ny fahazoan-dalana - ireo farany dia napetraka amin'ny sticker manokana eo amin'ny faran'ny router.
Tsara homarihina fa ny pejy dia azo faritana ho adiresy fidirana.tplinklogin.net. Tsy adiresy mpanamboatra intsony ity adiresy ity, satria tsy maintsy miditra ny fidirana amin'ny aterinetotplinkwifi.net. Raha toa ka tsy misy io safidy io, dia tsy maintsy miditra amin'ny IP an'ny router amin'ny tanana ianao192.168.0.1na192.168.1.1. Famindrana anarana sy fanomezan-dàlana ho an'ny tenimiafotraAdmin.
Rehefa miditra ireo fepetra ilaina rehetra dia hisokatra ny interface interface.
Mariho fa ny endriny, ny fiteny ary ny anaran'ny zavatra sasany dia mety miova arakaraka ny fikirakirana voafetra.
Mampiasa "Quick Setup"
Ho an'ireo mpampiasa izay tsy mila manatsara ny fari-piainan'ny router, ny mpanamboatra dia manamboatra fomba fanao noforonina noforonina "Fanaraha-maso haingana". Ampiasao ny fizarana mifanaraka amin'ny bokotra ankavia ary ampiasao ny bokotra raha hampiasa izany. "Next" amin'ny tapany afovoan'ny interface.
Toy izao ny dingana manaraka:
Ny dingana voalohany dia ny hisafidy firenena, tanàna na faritra, mpanome tolotra aterineto, ary karazana fifandraisana eo amin'ny serasera. Raha toa ka tsy nahita ny paikady izay mety amin'ny tranga ianao dia jereo ny boaty "Tsy hitako ny toe-javatra sahaza" ary mandehana any amin'ny dingana 2. Raha toa ka tafiditra ao ny sehatra dia mandehana mivantana mankany amin'ny dingana 4.
Ankehitriny dia tokony hifidy ny karazana fifandraisana WAN. Mampahatsiahy anareo fa azo jerena ao amin'ny fifanarahana amin'ny serivisy mpanome tolotra aterineto ity vaovao ity.
Miankina amin'ny karazana voafidy, mety ilaina ny miditra ao amin'ny login sy ny tenimiafina, izay tsy maintsy ampiharina amin'ny taratasy fifanekena.
Ao amin'ny varavarankely manaraka, mametraha ny safidy cloning ho an'ny adiresy MAC an'ny router. Avereno indray ny fifanarahana - ity nuance ity dia tokony halefa any. Mba hanohy, tsindrio "Next".
Amin'ity dingana ity, mametraka ny fampielezana ny Internet amin'ny Wireless. Voalohany, mametra ny anaran'ny tambazotra mifanaraka amin'izany, izany no SSID - ny anarana rehetra hanao. Dia tokony hifidy faritra ianao - ny faharetan'ny Wi-Fi miasa dia miankina amin'izany. Fa ny sehatra manan-danja indrindra eto amin'ity varavarankely ity dia ny fiarovana fiarovana. Hamelona ny filaminana amin'ny fanamarinana ilay boaty. "WPA-PSK / WPA2-PSK". Mametraka ny tenimiao mifanaraka amin'izany - raha tsy azonao atao ny mihevitra azy io, ampiasao ny mpamorona antsika, aza hadino ny manoratra ny voka-bary. Parameters avy amin'ny singa "Fampivoarana ny Wireless Wireless" Mila miova fotsiny raha misy olana manokana. Hamarino ny fanovana napetraka ary tsindrio "Next".
Tsindrio izao "Hamita" ary jereo raha misy fahafahana mampiasa Internet. Raha toa ka miditra tanteraka ny safidy rehetra, dia hiasa amin'ny fomba mahazatra ny router. Raha voamarina ny zava-manahirana, dia avereno averina amin'ny dingana fametrahana ny fikarakarana haingana, raha hijery tsara ny soatoavin'ny parameter input.
Fomba fitantanana manual
Ireo mpampiasa misimisy matetika dia aleony manamboatra ny safidy rehetra ilaina amin'ny router. Na izany aza, amin'ny tranga sasany, ireo mpampiasa tsy manana traikefa dia tokony hampiasa izany fomba izany - ny fomba fiasa dia tsy sarotra kokoa noho ny fomba haingana. Ny zavatra tena ilaina tokony hotsaroana dia ny hoe tsara kokoa ny tsy manova ny fikandrana tsy mazava.
Fametrahana fifandraisana amin'ny mpamatsy
Ny ampahany voalohany amin'ny manipulation dia ny mametraka fifandraisana amin'ny Internet.
Sokafy ny fikandrana ny fikandrana router ary ampitombo ireo sehatra. "Network" ary "WAN".
Ao amin'ny fizarana "WAN" mametraka ny mari-pamantarana nomen'ny mpamatsy. Ireto ny fombafomba mifandraika amin'ny karazana fifandraisana malaza indrindra amin'ny CIS - PPPoE.
Ny mpamatsy sasany (indrindra fa any amin'ireo tanàn-dehibe) dia mampiasa fampiharana hafa - indrindra, L2TPHo an'io koa dia mila mametraka ny adiresin'ny mpizara VPN ianao.
Ny fiovana fanovana dia mila mamonjy sy mamerina ny router.
Raha mila mandefa adiresy MAC ny mpitaona, dia azonao atao ny miditra amin'ireo safidy ao amin'ny MAC Cloningizay mitovitovy amin'izay voalaza ao amin'ny fizarana fametrahana haingana.
Ny fidirana amin'ny tranonkala Wi-Fi dia amin'ny alàlan'ny fizarana "Wireless Mode" ao amin'ny sakafo eo ankavia. Sokafy izany ary araho amin'ny algorithm manaraka:
Midira eny an-tsaha «SSID» anaran'ilay tambanjotra azo antoka, hifantina ny faritra marina, ary tehirizo ny fiovana miova.
Mandehana any amin'ny fizarana "Wireless fiarovana". Tokony hijanona amin'ny endri-tsoratra ny karazana fiarovana - "WPA / WPA2-Personal" mihoatra noho ny ampy. Ampiasao ny version efa ela «WEP» not recommended. Voafaritra ny famaha encryption "AES". Avy eo, mametraka ny tenimiafina ary tsindrio "Save".
Tsy ilaina ny manova ny fizarana sisa - fa ataovy izay hahazoana fifandraisana sy fizarana ny Internet amin'ny alalan'ny Wi-Fi.
Ireo dingana etsy ambony dia mamela anao hiantoka ny fiasan'ny router. Notantarainay ihany koa fa manana endri-javatra fanampiny ny router TL-WR842ND, noho izany dia hanolotra anao fohifohy ho azy ireo ianao.
Port USB multifunction
Ny endri-tsoratra mahaliana indrindra amin'ny fitaovana voakasik'izany dia ny port USB, ny tranokala azo jerena ao amin'ny sehatry ny web-configurator antsoina hoe "Settings USB".
Azonao atao ny mampifandray ny rindrambaiko 3G na 4G amin'io port io, ka mamela anao hanao izany raha tsy misy fifandraisana an-jambany - fizarana 3G / 4G. Misy karazana firenena maro manana mpamatsy lehibe, izay manome antoka ny fametrahana ny fifandraisana. Mazava ho azy, azonao atao ny manamboatra azy io manakaiky - mifidy ny firenena, mpanome tolotra mpanodina data ary miditra ireo fepetra ilaina.
Rehefa mampifandray amin'ny connecteur ny rindran-damba farany, dia azo faritana ho tahiry FTP ho an'ny rakitra na mamorona mpizara media. Amin'ny tranga voalohany, azonao atao ny mametraka ny adiresy sy ny port de connexion, ary koa mamorona tahiry samihafa.
Noho ny asan'ny mpizara media, azonao atao ny mampifandray ireo fitaovana multimedia amin'ny tamba-pahazavana amin'ny router ary mijery sary, mihaino mozika na mijery horonantsary.
Ny safidin'ny serivera printy dia ahafahanao mampifandray ilay mpanonta amin'ny serasera USB amin'ny router ary mampiasa ny mpanonta toy ny fitaovana fanadalana - ohatra, mba hanonta ny antontan-taratasy avy amin'ny takelaka na smartphone.
Ankoatra izany, dia azo atao ny mifehy ny fidirana amin'ny karazam-pifandraisana rehetra - izany dia atao amin'ny alalan'ny faritra iray "User Accounts". Azonao atao ny mamafa na mamafa ireo kaonty, ary manome azy ireo faneriterena, toy ny zon'ny mpamaky afa-tsy ny rakitra tahiry.
Ity router ity dia manohana ny teknolojia WPS, izay manamora ny dingan'ny fifandraisana amin'ny tambajotra. Azonao atao ny mianatra momba ny atao hoe WPS ary ny fomba tokony hampifanaraka azy amin'ny lahatsoratra hafa.
Vakio bebe kokoa: Inona ny WPS amin'ny router
Fampiasana ilay fizarana "Access Control" Azonao atao tsara ny mandrindra ny router mba ahafahana miditra amin'ny fitaovana mifandraika amin'ny loharano sasany amin'ny aterineto amin'ny fotoana iray. Ity safidy ity dia ilaina ho an'ireo mpitantana ny rafitra ao amin'ny fikambanana madinika, ary koa ho an'ny ray aman-dreny izay tsy manana fepetra ampy "Fifehezana ny ray aman-dreny".
Eo ambanivohitra "Fitsipika" Misy ny rafitra fanaraha-maso ankapobeny: ny fisafidianana ny lisitra fotsy na mainty, ny fametrahana sy ny fitantanana ny fitsipika, ary ny fanesorana azy ireo. Amin'ny fanindriana bokotra iray Mpandrindra Fanoroana Ny famoronana fitsipika fanaraha-maso dia misy amin'ny fomba maody.
Ao amin'ny paragrafy "Node" Azonao atao ny mifidy ireo fitaovana izay hampiharana ny fitsipika mifehy ny fidirana amin'ny Internet.
Subsection "Tanjona" Natao hisafidy ireo loharano izay voafetra ny fidirana.
teboka "Azo antoka" dia ahafahanao manamboatra ny faharetan'ny fameperana.
Azo antoka fa ilaina ny sehatra, indrindra raha tsy voafetra ny fidirana ao amin'ny Internet.
Ny router out-of-the-box dia manohana ny fahafahana mampifandray mivantana amin'ny fifandraisana VPN mivantana, manilika ny ordinatera. Ny fanovana ho an'io asa io dia azo jerena ao amin'ny loha-hevitra ao amin'ny Internet. Tsy misy fepetra marobe tokoa - azonao atao ny mampiditra fifandraisana amin'ny politika IKE na IPSec, ary koa mahazo fidirana amin'ny mpitantana fifandraisana tsy dia mahomby.
Izany dia raha ny marina, ny zavatra rehetra tianay holazaina aminao momba ny fampifanarahana ny router TL-WR842ND sy ny endri-pifaneraserany. Araka ny hitanao dia azo ampiasaina tsara ny fitaovana ampiasaina amin'ny vidiny lafo, nefa mety ho azo ampiasaina ho toy ny router ny trano izany.